Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Xidhay Wejiga Koowaad Ee Barnaamujka Shaqo Qaran DAAWO | Hayaan News
Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Xidhay Wejiga Koowaad Ee Barnaamujka Shaqo Qaran DAAWO
Hargaysa (Hayaannews): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa shalay soo xidhay wejiga koowaad ee barnaamijka carbiska dhallinyarada ee shaqo qaran oo muddo saddex bilood ah ka socday degaanka Darar-weyne ee dhinaca waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargaysa.
Munaasibadda uu madaxweynuhu ku soo xidhay barnaamijka shaqo qaran, waxa ka qaybgalay xubno ka mid ah golaha wasiirrada, taliyeyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka, qaar ka mid ah madaxda hay’adaha madaxa bannaan ee qaranka.
Hoggaanka barnaamijka shaqo qaran, siyaasiyiin, waxgarad, iyo haldoor kale.
Waxaana madasha laga jeediyey hadallo salka ku haya guulaha uu barnaamujkani u soo kordhiyey qaranka, dhiirigelinta dhallinyarada iyo sida uu wax uga taray isdhexgalka iyo is fahanka bulshada.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo khudbad ka jeediyay xidhitaanka wejiga labaad ee Barnaamijka shaqo qaran, ayaa ammaanay mashruucan.
Isagoo taxay ujeeddooyinka iyo natiijooyinka laga doonayo barnaamujka qaran ee shaqo qaran. Waxaanu yidhi “Shaqo qaran waa xarunta aynu doonaynno inuu caqliga Somaliland ka shaqeeyo oo uu hore u mariyo, shaqo qaran waxa aynnu ka rabnaa inay dadku noqdaan qaar If iyo Aakhira-ba wax taransada.
Shaqo qaran waxaynu doonaynaa inay dadku ka helaan waajibka uu qaranku ku leeyahay, isagana uu qaranku ka helo xuquuqda qaranku ka rabo, ujeeddada aynnu shaqo qaran u Aas-aasnayna waa tabobar maskaxeed iyo mid jidheed.”
Madaxweynuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in baraanujka shaqo qaran ay kasoo aflaxeen guutooyin da’yar oo xooggoodu dihin yahay, kuwaas oo ay ka go’an tahay inay dalkooda horumariyaan,
“Waxaan cod dheer cid walba ugu sheegayaa inay Barnaamujka shaqo qaran maanta u dareereen iyaga oo guutooyin xoog leh sidii ay dalkooda hore ugu marin lahaayeen ee ay mutadawacnimo ugu shaqayn lahaayeen, gobollada oo dhan, cadowgu haka naxo Somaliland-na haku faraxdo” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Geesta kale agaasimaha guud ee Barnaamujka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan (Mu’addinka), oo madasha hadal ka jeediyey hadal dhinacyo badan leh, ayaa ugu horrayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uga mahadnaqay ku dhiirrashada iyo ka midho-dhalinta barnaamujka lagu carbinayo dhallinyarada ee shaqo qaran.
Waxaanu hoosta ka xarriiqay inay tallaabadasaasi tahay mid hirgashay guul wax ku ool ahna laga gaadhay, taasoo tusaale fiican u ah in horumar kastoo gacmaha la isu qabsado laga midho dhalinkaro.
Sidoo kale-na ku dheeraaday Agaasimuhu guulaha uu barnaamujkani gaadhay iyo faa’iidooyinka uu u keenay bulshada reer Somaliland iyo da’yarta carbiska ku jirteyba.
Waxaanu arrimahaas ka hadlayayna uu yidhi “Waxaan si kalsooni ku jirto halkan uga sheegayaa in muddadii barnaamijka shaqo qaran socday si mug leh loo gaadhay himilooyinkii la higsanayay oo ay ugu mudnaayeen is-dhexgalka.
Isu kal-samaanta iyo is-weheshiga dhallinyarada Somaliland, waxa bislaaday ilaa heer wacyiga iyo aqoonta dhallinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed, dhaqameed, dhaqaale, bulshadeed iyo Juquraafiga dalka Somaliland, waxana abuurmay dareen waddaniyadeed iyo mid sharci, waxana dhismay garaadkii iyo caafimaadkii jidh ahaaneed ee dhallinyada”.